को बारे मा - CZH / Fmuser एफएम ट्रांसमीटर चीन आपूर्तिकर्ता सम्पर्क: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
हामी एफएम ट्रान्समिटर र एफएम ट्रान्समिटर सामानको उत्पादन र बिक्रीमा विशेषज्ञता राख्छौं। हामी years बर्षदेखि एफएम ट्रान्समिटर निर्यात गर्दैछौं। यो धेरै राम्रोसँग बेचिन्छ। त्यसैले मलाई यो र यसको बजार थाहा छ। यो धेरै उच्च प्रदर्शन र उच्च stablity छ। हामीसँग विश्वभर ग्राहकहरू छन्, केवल बिक्रेताहरू मात्र होइन उपभोक्ताहरू पनि।
हाम्रो उत्पादनले समावेश गर्दछ: एफएम ट्रान्समिटरहरू, एन्टेनाहरू, পাওয়ারसप्लीहरू र पीसीबी र रेडियो र एफएम ट्रान्समिटर सहायक उपकरणहरूको यस प्रकारको।
एफएम ट्रान्समिटरमा years बर्षको अनुभवको साथ, हामी धेरै नै व्यावसायिक छौं। हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू र उत्कृष्ट ग्राहक सेवाको साथ सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरका उत्पादनहरू आपूर्ति गर्न समर्पित छौं! यदि तपाईंसँग एफएम ट्रान्समिटरको बारेमा कुनै प्रश्न छ र यदि तपाइँ हाम्रो एफएम ट्रान्समिटर किन्नुहुन्न भने, कृपया। हामीलाई तपाईंको प्रश्नहरू बताउन नहिचकिचाउनुहोस्, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न र तपाईंको सेवा दिन धेरै इच्छुक छौं!
कुनै FM ट्रान्समिटर किन्नुहोस् जब सम्म तपाईं Fmuser एफएम ट्रांसमिटर देख्नुहुन्न।
के तपाईं आफ्नो रेडियो स्टेशन निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो एफएम ट्रान्समिटर किन्नुहोस्, केवल यसलाई प्लग गर्नुहोस्, सजिलो तपाईंको एफएम रेडियो निर्माण गर्नुहोस् तपाईंलाई मनपर्ने कुनै पनि अडियो प्रसारण गर्न, त्यसपछि तपाईं हावामा हुनुहुन्छ! तपाईंले हाम्रो एफएम ट्रान्समिटरलाई चिन्नु भएपछि, तपाईं म जस्तो उत्साहित हुनुहुनेछ! हामी यस आईटमलाई years बर्षदेखि बेच्दै छौं। यो धेरै राम्रो बेचेको छ। त्यसैले मलाई यो र यसको बजार थाहा छ। यो एक धेरै विशेष र दुर्लभ उत्पादन हो। धेरै व्यक्तिहरूलाई यसको आवश्यक पर्दछ, तर तिनीहरूले त्यसलाई फेला पार्न सक्दैनन्। किनभने तिनीहरू केवल धेरै व्यक्तिहरू छन् संसारमा यस प्रकारको उत्पादन बेच्न। हामीसँग विश्वभरि एफएम ट्रान्समिटर ग्राहकहरू छन्, केवल पुनर्विक्रेता मात्र होइन उपभोक्ताहरू। यद्यपि धेरै मानिसहरूलाई वास्तवमै यो आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू पनि धेरै व्यक्ति हुन् जसले यो उत्पादन जान्दैनन्। तिनीहरू जान्दैनन् कि यो के हो र यसले के प्रयोग गर्न सक्दछ। तर उनीहरूले यो उत्पादन र यसको कार्यहरू थाहा पाइसके पछि, तिनीहरू यसमा धेरै रुचि राख्नेछन् र एउटाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नेछन्। जो कोही मेरो उत्पादन हेर्नुहोस् र जो को लागी यो उत्पादन को खरीद गर्न चाहानुहुन्छ। मसँग भारतका ग्राहक छन् जसले हाम्रो एफएम ट्रान्समिटर किन्थे। ऊ असाध्यै खुसी छ र मलाई भन्यो कि उसको एउटा सपना एउटा सानो रेडियो स्टेशन निर्माण गर्नु हो र अब उसको सपना साकार भएको छ!
तपाईं कुनै पनि कारणको लागि कुनै पनी समय यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको पूरै घर, तपाईंको पछाडिको यार्डमा। क्रिष्टमस प्रकाश प्रदर्शन गर्दछ, तपाईंको काममा, तपाईंको पोखरी, फिटनेस केन्द्रहरू, तपाईंको कारमा, तपाईंको डेक वा पेशन, सुधार सुविधाहरू, तपाईंको डु on्गामा, जबकि तातो टबमा आराम गर्दै, विश्वविद्यालयहरू, क्याम्पिंग गर्दा तपाईंको ग्यारेज, गिर्जाघरहरू, आउटडोर थिएटरको साथ, स्कूल घोषणाहरू, फन्डरहरू र पैदल-ए-थोनहरू, छिमेकी ब्लाक पार्टीहरू, बिदामा, जब तपाईं कामको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ। र यस्तै…
मोबाइल अडियो जुकेबक्स - तपाईंको अडियो तपाईंको नोटबुक कम्प्युटर वा एमपी player प्लेयरबाट तपाईंको कारको एफएम रिसीभर वा कुनै पनि एफएम रेडियोमा प्रसारित गर्नुहोस्।
तपाइँको लागी निजी एफएम रेडियो स्टेशन पार्टी - तपाईंको घरको कम्प्युटर, आईपड वा कुनै पनि एमपी3प्लेयरबाट कुनै पनि अडियो ढाँचा तपाईंको घरमा सबै एफएम रेडियोमा प्रसारित गर्नुहोस्, तपाईं वाणिज्य-नि: शुल्क प्ले सूची छान्नुहोस् र कुनै मासिक शुल्कहरू तिर्नुहोस्.
MP3 / MP4 प्लेयर - तपाइँको घर, कार्यालय वा कार भर कुनै पनि एफएम रेडियो रिसीभर को माध्यम बाट तपाइँको MP3 / MP4 प्लेयर अडियो सुन्नुहोस्।
तपाईंको कार्यालय वा व्यवसाय को लागी अडियो अनुकूलित - तपाईंको मनपर्ने अडियो वा इन्टरनेट स्ट्रिमि audio अडियो तपाईंको कार्यालयमा तपाईं र तपाईंको सहकर्मीहरूको लागि प्रसारण गर्नुहोस्।
उपग्रह रेडीo - तपाईंको उपग्रह रेडियो रिसीभरबाट कुनै पनि अडियो तपाईंको घर वा अफिस भित्र सबै एफएम रिसीभरहरूमा प्रसारण गर्नुहोस्।
होम थियेटर अडियो - दायरा भित्र सबै एफएम रिसीभरहरू तपाईको कम्प्युटर वा डीभीडी प्लेयरबाट कुनै अडियो प्रेषण गर्नुहोस्। (* विशेष केबल कन्भर्टर एडेप्टर आरसीए ज्याकसँग जोड्न आवश्यक हुन सक्छ, छुट्टै बेचिन्छ)
ताररहित पीए - प्रत्यक्ष आवाज वा प्रिरेकर्ड गरिएको अडियो दायरा भित्र सबै एफएम रिसीभरहरू प्रसारण गर्नुहोस्। इनडोर / आउटडोर भ्रमण, घर जग्गा प्रमोशन, व्यवसाय पदोन्नति, चर्च अनुवाद सेवाहरू, प्रत्यक्ष लिलामी, आदि ... को लागि उत्तम।
इन्टरनेट रेडियो - तपाईंको मनपर्ने इन्टरनेट स्ट्रिमि radio रेडियो स्टेशन तपाईंको व्यक्तिगत एफएम रेडियो रिसीभर वा एफएम हेडसेटमा प्रसारित गर्नुहोस्।
व्यवसाय / घर जग्गा कुरा गर्ने चिन्ह - तपाईंको घर लिस्टिंग वा व्यवसाय सम्भावित ग्राहकहरूको लागि प्रचार गर्नुहोस् जसले ड्राइभ गर्छन्। आवाज वा कुनै पूर्व रेकर्ड सन्देश प्रयोग गर्नुहोस् जब मानक अडियो प्लेयर वा एमपी3प्लेयरमा जडान हुन्छ।
खेल घटनामा प्ले अडियोद्वारा प्ले प्रसारण गर्नुहोस् - सबै उपस्थितिमा खेल द्वारा प्ले प्रसारण; सबै सहभागीहरूलाई अडियो सुन्नका लागि केवल मानक एफएम रेडियो रिसीभर आवश्यक छ।
अधिक धेरै अनुप्रयोगहरू ...।
यससँग उपयुक्त: आईपड, एमपी player प्लेयर, स्याटेलाइट रेडियो, सीडी प्लेयर, पीडीए, डीभीडी प्लेयर, पीसी / म्याक, डेस्कटप / नोटबुक कम्प्युटर, टिभी र अधिक ..
सेटअपको लागि सजिलो साधारण प्रोडक्ट्स। त्यसोभए तपाईंले हाम्रो एफएम ट्रान्समिटर किन्नुपर्दछ, तपाईंलाई एफएम ट्रान्समिटर निर्माणको समय चाहिदैन र यदि यो सहि काम गर्छ भने अचम्म मान्नु पर्दैन। एफएम ट्रान्समीटर सेटअप गर्न धेरै सजिलो छ। तपाईं छवि को रूप मा संकलित छैन। यो किट हो, मात्र यसलाई प्लग गर्नुहोस्, कुनै चीज किन्न आवश्यक पर्दैन। हाम्रो छिमेकी -२-वर्षीय हजुरआमा यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्दछन्। यदि व्यक्तिहरूले केबुलबाट निश्चित ठाउँमा आफ्नो संगीतको साझेदारी गर्न सक्दछन्। र यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, टिभीमा जडान डीभीडी जत्तिकै सरल। साधारण १० मिनेट भित्र तपाईंको रेडियो सेटसन सेट अप गर्नुहोस्!
यसलाई ग्लोबल प्रयोग गर्नुहोस्
110 एफ -२२०V AC पावर एडाप्टरको कारण तपाईं संसारमा कहिँ पनि एफएम ट्रान्समिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रिक्वेन्सी -220 76-१०108 मेगाहर्ट्ज हो, यसले एफएम रेडियोको सबै सार्वजनिक आवृत्तिलाई कभर गर्दछ, जापानमा पनि!
सरल, विश्वसनीय एन्टेना।
एन्टेना स्थापना गर्न तपाईंलाई कुनै इलेक्ट्रोनिक ज्ञानको आवश्यक पर्दैन, यसलाई प्लग इन गर्नुहोस् र राम्रोसँग कार्य गर्नुहोस्।
ट्रान्समिटरसँग एक ठूलो प्रसारण दूरी मात्र छैन तर एफएम स्टेरियोमा पनि प्रसारण हुन्छ।
सबै एक प्याकेजमा
तपाईलाई आवाश्यक पर्ने सबै प्याकेजमा समावेश छन्।
PLL प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंलाई थाहा छैन कि PLL टेक्नोलोजी के हो। केहि एफएम ट्रान्समिटरहरूसँग PLL टेक्नोलोजी छैन, त्यसैले संकेत प्रसारित गर्दा बग्नेछ। हाम्रो एफएम ट्रान्समिटरसँग पीएलएल टेक्नोलोजी छ, यदि तपाईंले frequency 99.1.१ मेगाहर्ट्जलाई आफ्नो फ्रिक्वेन्सीको रूपमा छान्नुभयो भने, PLL ले तपाईंलाई वातावरणको पर्वाह नगरी त्यो फ्रिक्वेन्सीमा राख्नेछ।
ठेगाना:No.1502 कोठा HuiLan भवन No.273 Huanpu रोड गुआंगज़ौ चीन जिप:510620